एनआरएनएको निर्वाचन पद्धति ठिक भएन- शशि श्रेष्ठ – Rhino khabar
Home/प्रविधि/एनआरएनएको निर्वाचन पद्धति ठिक भएन- शशि श्रेष्ठ
एनआरएनएको निर्वाचन पद्धति ठिक भएन- शशि श्रेष्ठ
यतिखेर देशबिदेशमा एनआरएनएको चुनावी सरगर्मी बढिराखेको छ। आगामी अक्टोवर १५–१७ मा काठमाडौंमा एनआरएनएको विश्व सम्मेलन हुँदैछ । उक्त सम्मेलनले २ बर्षका लागि नयाँ नेतृत्वको छनोट पनि गर्नेछ। एनआरएनले हाल विश्वका ८१ वटा देशहरुमा बिभिन्न ईकाईहरुको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिसकेको छ भने काठमाण्डौमा सम्पन्न हुने आगामी विश्व सम्मेलनको तयारीमा हाल एनआरएनए जुटिराखेको छ। प्रविधिको यो जमानामा पनि एनआरएनएको चुनावी पद्धति र प्रतिष्पर्धा पारदर्शी नभएको भन्दै कतिपय एनआरएनएकै सदस्यहरुले सार्वजनिक रुपमैं असन्तुष्टिहरु पोख्न थालेका छन। ७०/८० लाख विदेशी नेपालीहरुमाझ फैलिएको एनआरएनएको केन्द्रिय निर्वाचनमा चाहिँ १/२ हजारले मात्र सहभागिता जनाए पनि हुने प्रावधान धेरै एनआरएनए सदस्यहरुलाई मन परेको छैन। एनआरएनएको यस्तै अपारदर्शी निर्वाचन पद्धतिका बारेमा सार्वजनिक रुपमैं असन्तुष्टि पोख्दै आऊनुभएका एक सदस्य हुनुहुन्छ – शशि श्रेष्ठ
पेशाले आईटी ईन्जिनियर श्रेष्ठ लामो समयदेखि डेनमार्कमा बस्दै आऊनुभएको छ। डेनमार्कमैं रहेर आईटी आऊटसोर्सिङ्ग बिजनेस संचालनसमेत गर्दै आऊनुभएका श्रेष्ठ डेनमार्कमा हालै सम्पन्न एनआरएनएको निर्वाचनमा युवा संयोजको पदमा उहाँ निर्विरोध हुनुभएको छ। एनआरएनएको नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अत्यन्तै भड्किलो, खर्चिलो र अपारदर्शी बन्दै गएकोप्रति उहाँले सार्वजनिक रुपमैं आवाज उठाऊन थाल्नुभएको छ। जागरणपोस्टसंगको कुराकानीमा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ-“बिज्ञान र प्रविधिको यो युगमा पनि प्रत्येक सदस्यले घरमैं बसि बसि एक क्लिकको भरमा आफ्नो उम्मेद्वार छनोट गर्न नपाऊनु बिडम्वनाको कुरा हो। सम्बन्धित देश र क्षेत्रका प्रतिनिधिले गएर भोट हाल्ने ब्यवस्था अबैज्ञानिक, अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक छ।” उहाँले भन्नुभयो। आफूलाई आईटी क्षेत्रतर्फ लामो अनुभव भएको बताऊँदै श्रेष्ठ थप्नुहुन्छ : विश्वभर फैलिएर रहेका नेपाली नागरिक भोट हाल्नकै लागि नेपाल जानसक्ने कुरै भएन। सम्भावना पनि हुँदैन। प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न पठाऊनुको साटो बरु अनलाईन भोटिङ्ग सिस्टम गरे त्योभन्दा पारदर्शी निर्वाचन अर्को हुनैसकैन। रिजल्ट पनि तुरुन्तै आऊने। कसले कति मत पायो, हरेक भोटरहरुलाई सहजै थाहा पनि हुने। किनकि मेरो अनुभवले त अनलाईन सिष्टममैं जानुपर्छ भनेर भन्दछ। जसको उदाहरणस्वरुप एनआरएनए डेनमार्कको निर्वाचनमा हेर्नुहोस- हामीले उक्त निर्वाचनमा प्रत्येक सदस्यले अनलाईन भोटिङ्ग सिस्टमको माध्यम भोट दिएर यसको सफल प्रयोग पनि गरेका छौं। नतिजा पनि २ घण्टाभित्रमैं आयो। हामीसंग भएको MIS Database मार्फत अनलाईन फर्म भर्न सकिएजस्तै अनलाईन भोटिङ्ग पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सकियो भने अरु २ लाख जति थप सदस्यहरु थप हुने पनि पक्का छ। जसको उदाहरणस्वरुप एनआरएनए डेनमार्कको निर्वाचनमा हेर्नुहोस- हामीले उक्त निर्वाचनमा प्रत्येक सदस्यले एनआरएनएको MIS system बाट अनलाईन फर्म भरेर अनलाईन भोटिङ्ग माध्यम भोट दिएर यसको सफल प्रयोग पनि गरेका छौं। बरु त्यसको लागि आफू निरन्तर लागिपरेको हुनाले मेरोतर्फबाट के-कस्तो सहयोग गर्नुपर्दछ, म हमेशा तयार छु- श्रेष्ठले भन्नुभयो।
प्रविधिको यो समयमा प्रत्येक एनआरएनका सदस्यलाई अनलाईन भोटिङ्ग सिस्टम उपलव्ध गराईदिए हुन्न र ? प्रविधिको यो युगमा हामीले प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्नैपर्दछ भने मेरो सुझाव हो- श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ। साथै सबैलाई संगै समेटेर अंघाढि बढौं भन्ने मेरो धारणा हो र यसको लागि मेरोतर्फबाट भरमग्दुर प्रयास पनि हुनेछ। सबै बिदेशी नेपाली एनआरएनएका सदस्य र सबै एनआरएनए सदस्यको समान हैसियत मेरो चिन्तन हो। त्यसैले एनआरएनएको भड्किलो शैलीमाथी समिक्षा अवश्यक छ।
सम्बन्धित देश र क्षेत्रका प्रतिनिधि चुनेर मात्र नेपाल मा भड्किलो र खर्चिलो चुनाव गराउने होईन कि,बिदेशिएका सबै नेपाली नागरिकलाई एकसाथ एकैदिन सम्बन्धित देशबाट नै मतदान गर्न पाऊनुपर्ने ब्यवस्था आजको अवश्यता पनि हो। त्यसैले अबको एनआरएनए नेतृत्वले यसबारेमा सोंच्नैपर्दछ।
एनआरएन डेनमार्कको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा युवा संयोजकमा निर्विरोध आईटी ईन्जिनियर शशि श्रेष्ठ।
बिदेशमा बस्ने नयाँ पुस्ता जो हरेक कुरामा एक कदम अगि छन तिनलाई कसरी एनआरएनको अभियानमा जोड्ने अर्को चुनैती छ। समय अनुसार हामी परिवर्तन हुने कि नहुने त? श्रेष्ठको प्रश्न छ। उदाहरणको लागि डेनमार्क नै उत्तम छनौट साबित हुनेछ । यहाँका जनताहरु विश्वको जहाँ सुकै जुनसुकै कुनामा रहे तापनि उनिहरुले आफ्नो पहिचान नबदलेको वा नगुमाएको वा परित्याग नगरेको अवस्थामा प्रविधिको सहयोगका कारण निश्चित समयावधिभित्र मतदान गरी उपयुक्त उमेदवारको छनौट गर्ने गर्दछन। यसर्थ हामीहरु पनि प्रविधिको जमानामा परम्परावादी हुनुको कुनै तात्पर्य देख्दिन म । यसले त केवल अपुरो, असन्तुलित एवं अस्पष्ट नतिजा दिने गर्दछ। एनआरएनको आगामी नेतृत्वले अब चाहिँ जरुर यसबारेमा सोंच्नैपर्दछ। यो कुरा एनआरएनको हकमा मात्र होईन, नेपालको सरकारले पनि बिदेशमा रहेका करिब ८० लाख नेपाली नागरिकमाझ अनलाईन भोटिङ्गको ब्यवस्था गरेर आफ्ना नागरिकलाई मतदान गर्नपाऊने अधिकारबाट वन्चित गर्नुहुँदैन। प्रविधिको प्रयोगले छिटो, छरितो एवं पारदर्शी पद्धति अपनाऊनुपर्दछ। संसारभरि अनलाईन भोटिङ्ग प्रविधिको बिकाश गर्नमा आफू लागीपरेको बताऊँदै श्रेष्ठले एनआरएनमात्रै नभएर नेपाल सरकारले पनि यस्ताखाले प्रविधिलाई आत्मसात गर्नैपर्दछ। बरु त्यसको लागि मेरोतर्फबाट के-कस्तो सहयोग गर्नुपर्दछ- म हमेशा तयार छु- श्रेष्ठले भन्नुभयो।
प्रस्तुती: बिजय ज्ञवाली
६० दिने अभियानको आज १९ औ दिन : केन्द्रीय टर्मिनल बसपार्कमा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न